Voina an-dalambe :: Telo mianaka indray voadonan’ny fiara teny an-tsisin’arabe • AoRaha
Nivarahontsana ny mponina teny Maibahoaka Ivato, raha nandre ny fahafatesan’ireto telo mianaka vokatry ny lozam-pifamoivoizana, tamin’ny talata 7 janoary lasa teo. Teny an-dalana saika haka fiara fitaterana hamonjy fodiana ity renim-pianakaviana, tamin’io fotoana nisehoan’ny loza io. Nitarika ny fahafatesany ny dona mafy nahazo azy noho ny fahaverezan-dra be loatra. Mitantara ny tranga sy ny zava-nisy ny zanany vavimatoa, mbola tena tao anatin’ny alahelo tanteraka.
Andriamiarilala Sahondra na Lala kely, tso-piainana fony fahavelony.
Tsy nampoizina. Renim-pianakaviana, miasa tena, Andriamiarilala Sahondra na i Lala Kely, izay mamelona irery an’ireo zanany efatra mianadahy, rehefa nisaraka tamin’ny vadiny. Monina tsy lavitra ny toerana nisehoan’ny loza namoizany ny ainy, ny trano fonenan’ilay lehilahy mpiara-miasa aminy. Niara-dalana tamin’io lehilahy io hamonjy fiara fitateram-bahoaka izy no niseho ny loza. Nindaosin’ny fahafatesana ity renim-pianakaviana ity. Anisan’ny voafaoka ihany koa ny ankizy sendra tafara-dalana tamin’izy ireo, teny an-tsisin-dalana.
Avy any Ivato hihazo an’i Talatamaty ny kamiao marika “Renault” no nifaoka azy telo mianaka teny ampitan’ny arabe. Nifatratra tamin’ny hazobe avy eo ny fiara. “Maika ny handeha hody ny reninay no nantsoin’ilay mpiara-miasa aminy mba hiandry kely, izay vao hiara-handeha. Nifanao aloha sy aoriana izy ireo fa raha tsy izany niara-maty. Naratra sy voadona ny tongotr’io mpiara-miasa aminy io sy ilay zaza”, hoy Andrianandraina Feno Fitiavana, zanany vavimatoa, mitantara ny filazan’ireo olona nanatri-maso ny fitrangan’ny loza, rehefa tonga teny an-toerana.
Nifanome tanana tamin’ny famonjena ny olona naratra ny teo amin’ny manodidina. Nitolo-batana teny amin’ny borigadin’ny Zandarimaria ,Talatamaty, ny mpamily noho ny tahotra tamin’ny fitangoronan’ny olona marobe.
Reny nifono lamba
“Tsy navelan’ny mpitandro filaminana hijery ny reninay izahay nony tonga teny an-toerana. Nentina tao amin’ny Csb Talatamaty, izay vao nentina nody taty an-trano rehefa vita ny fizahan’ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana, teny Maibahoaka. Tsy nolazain’ilay olona niantso avy hatrany taminay hoe maty ny reninay.
Nambarany fa tratran’ny lozam-piarakodia fotsiny izy. Tankina tanteraka izahay, nony tonga teny, nahita azy efa nifono lamba”, hoy hatrany i Fitia, mankahery tena satria izy indray izao no lasa mpan- dimby reny tsy satry, hiahy ireo zandriny.
Nanaraka akaiky ny fivoaran’ny zava-nisy ny fianakaviana sy ny mpiara-monina. “Taty an-trano izahay no nisy niantso tamin’ny finday fa voadonan’ny fiara ny zanako vavitokana. Tsy fantatro intsony izay horaisina. Vetivety ihany izahay dia tonga teny an-toerana. Tsy afaka nanokatra ny lamba fa mbola miandry ny mpitsabo, hono. Mafy anie izany hoe olona tsy marofy no nivoaka ny trano nefa vetivety eo dia maty”, hoy kosa Razanabololona Denise, reniny, sady toy ny tsy mbola nino no nihivingivin-doha rehefa nitantara ny vesatry ny fahoriana.
Nisy ny fahasorenana ary niafara tamin’ny fifamaliana tamin’ny antso an-tariby teo amin’ny solontenan’ny
fianakaviana sy ny tompon’andraikitry ny orinasa, izay tompon’ny fiara nanao loza. Nandritra ny fotoana niresa-
dresahana tamin’ny fianakaviana no nisian’ny fifamaliana mafy teo amin’ny roa tonta.
Ankamantatra ny ho avy
Sady ray no reny Andriamiarilala Sahondra, tao an-tokantrano, noho ny fisaraham-panambadiana teo aminy sy ny vadiny. “Tena very tanteraka izahay, ankehitriny. Ny Dadanay efa nanambady olon-kafa. Ny reny nianteherana ity lasa tampoka. Iza no hiantoka ny ho avinay na fianarana na fiainana andavanandro ?”, hoy ny fanontanian’Andrianandraina Feno Tinah, vaviaivo, mandinika ny ho aviny manjavozavo manomboka izao, sady nanararaotra nanakiana ny fifandraisan’izy ireo tamin’ilay orinasa tompon’ny fiara nitera-doza.
Manjavozavo ny tatitra azon’ny fianakaviana momba ny tena antony nahatonga ny loza. Fandehanana mafy sy fahatapahana hisatra, ny voalohany. Ny fahasimbana ara-teknika ny faharoa, kanefa nisy ny dian’ny kodiarana tavela teo ambonin’ ny arabe. Tonga nijery ny loza ny avy ao amin’ny Foibem-pitondrana misahana ny fitsarana fiarakodia (DGSR). Fantatra, araka ny fanazavana nataon’izy ireo tao amin’ny tambajotra “Facebook”, fa lany tamin’ny 25 desambra 2019 ny fe-potoanan’ny fitsirihana teknikan’ny fiara.
Nifatratra tamin’ny tamboho ny fiara rehefa nahadona olona.
“Fiara lany fe-potoana amin’ny fitsirihana ve dia tokony mbola hivezivezy eny an-dalana na tapitra aza? ”, hoy
hatrany i Erica, mitazona ny findainy nifampiresahany tamin’ny solontenan’iry orinasa iry mba ho ren’ny fianakaviana mivory amin’ny zavatra tokony hatao. Nolavin’iretsy farany ny fanomezana fiara hitondra ny razana.
Nanambana ny hitondra ny raharaha amin’ny manamahefa ihany koa ny fianakavian-dRatompokovavy.
Niafara tamin’ny marimaritra niraisana ihany anefa ny fifandresen-dahatra teo amin’ny roa tonta. “Nanaiky nandoa ny hofan’ny fiara manokana mpitondra razana ihany ny tompon’ny orinasa.
Nangataka ihany koa ny fianakaviana ny mba hijeren’ny orinasa ny ho avin’izy efatra mianadahy, amin’ny saram-
pianarana sy ny fiahiana ara-tsosialy satria mbola an-dalam-pianarana ireo ankizy”, araka ny tatitra nataon’i Erica.
Nalevina, tamin’ny zoma 10 janoary 2020, teny Beravina Ilafy, ny nofo mangatsiakan’Andriamiarilala Sahondra na Lala kely.
Ahiahy fanapoizinana :: Zaza mpirahavavy niaraka hita faty
Fisamborana teto an-drenivohitra :: Nifampitifitra ny zandary sy ny mpaka an-keriny